Oromo Free Speech: Buufata oduu irraa gara daandii hojiitti (Action) haa jijjiirru
Buufata oduu irraa gara daandii hojiitti (Action) haa jijjiirru
Afomia Yosef Nega irraa | Onkololessa 24, 2013
“Buufata oduu irraa gara daandii hojiitti (Action) haa jijjiirru“ “Afaan ati haasoftu kun Afaan Simbiraatii (“yewewof Quanqa new inde?”) naan jedhan buddeenaf laga gama ce’een”. Akkuma uummatni Oromoo beeku baroota darban keessa kaayyoo lafa babal’ifachuufi uummata biro koloneeffachuuf akkasumas amala kadhattummaa isaniin kadhaadhaaf gara kibba Etiopiyatti kessumaa naannoo Oromiyaatti godaanaa turan. Isaan kunis waarra Habesha ofiin jedhan maqaa Habashaan daladala lafa Oromiyaa irraatii qarshii buufachaa bara dheeraaf tura. Bakka Amaarri naannoo Oromiyaa keessatti hin godaanne hin jiru jechuun ni danda’ama, haa ta’ulle malee keessumaa naannoolee Arsii, Baalee, Wallaggaa fi Showa akka fakkenyaatti kaasuun in danda’ama. Naannoo Arsii Assallaa fi Baalee Gobbaa ammalle uummatni baay’een Afaan Amharaa dubbachuun kan beekamu yeroo ta’u baay’oliinis kan naanichatti dhalatanii Afaan Oromoo hin beekne hedduutu jiru. Akka fakkeenyaatti barattoota Universitiitti ani waliin baradhe hedduun achii dhufan Afaaan Oromoo hin beekan.
Egaa Afaan beekuun akka carra hafuu ille ni danda’a, garuu jarri kun baadiyaa irra dhufan. Afaan qofa haasa’uunis Oromoo nama jechisiisuu dhiisuu danda’a. Hanga ammaattillee baadiyya Arsii keessaa ‘Mandarri Amhaara’ akka jiru naaf ibsan. Naannoo Showaa keessumaa bakka ‘Addisalem’ jedhamutti mana barnootaa Amaariffaan akka banamuuf hanga qaama naannoo Oromiyaatti(region) iyyata godhachuun beekamu. Isaanifis milka’eera.
Biyya Gondar Jedhamu keessa carraa buddeenaaf gaafan deemu sababan Afaan Oromoo dubbadhuuf waanni narran hin geenye hin jiru. Yoon hunda isinitti hime yeroo fixa, ‘hunda dubbatan dugdan dhungatani’ jedhu mitii. Ani garuu akka hojjetaatti magaala keessatti bilbila kaasee Afaan Oromoon yoon haas’elle nan rifadhan ture. Gaafa tokko hiriyya koo faana osoo Afaan Oromoo haas’aa deemnuu “Afaan ati haasoftu kun Afaan Simbiraatii (“yewewof quanqa newe inde?”) nuun jedhan, jaarsi guddaan nu bukkee deemaa jiran tokko. Akka aadaa keenyaatti jaarsi guddaan hin arrabsamu. Homaa hin deebisneef. Garuu akkas jenneen, ‘Lakki ‘Afaan Oromoo’ haasofne jenneen”. Isa booda akkas jedhanii nuuf deebisani;”ihee ye gala quanqa new ayidel? Nuun jedhan. Itti dabalaniis,”Isu quanqa ahunim tenagaralachewu inde? Ahuun Mengist Amarigna ayideleme indiyaweru yetederegew” jedhani. Umuriin isaanii 65 ta’u. Gaafa biraa immoo mana kireeffadheen ‘Oromoo ta’uukoo torbee lama booda na barani. Isa booda gaafa manni kiraayi ji’aa gahu jaartiin haati manaa balbala irra dhaabattee mucaa ishii tokkoo osuma gurrikoo dhagahuu ,”Hiji abbatuu gaallaan yebet kirrayi beyiihu” jettiin. Kuni bara 2012. Gaafa tokkos bishaan humnaa oli fayyadamte naan jettee erga na arrabsitee booda “Duroos qedime baweke noro indennanteen ayinet ekkoo beeteen alakeraayyim nebere” jette. Akkas jechuun “dursee osoon Oromoo ta’uukee beeka ta’ee mana koo warra akka keessaniif hin kireessu ture” jette. Gaafa biraas osoon Afaan Oromoon bilbila haasofsiisaa deemaa jiruu dhagaa natti darbatanii na reebaniiru.
Egaa kuni waan narra gahan keessaa isa xiqqoodha. Baruma 2013 kana keessaa barsiisaa naannoo Oromiyaa irraa dhufee Gondar University irraa barsiisaa ture tokkos biiroo keessatti reebanii ajjessuuf gaafa jedhani iyyuun ofirraa gadhiifachuu isaa ani raggaadha. Mana yaalaas geessaaa ture. Isa boodas lubbuu isaaf sodatee hojii gadhiisee baqatee bakkanni jiru hin beekamu.
Gara ergaakoo har’aatti yeroon dhufu; Wallagga keessatti fakkenyaaf naannoo laga Guddaa Qeexoo jedhamu Dambo Dollo keessatti ummatni bara Dargii dura Amahara irraa dhufanii buufatan abbaa warraa 500-600 ol ta’an akka jiran waan ani ijakoon argee jirudha. Ummatni naannoos ni beeka. Jarreen kun naannoo Dambi Dolloo qofaatti mandara tokko ta’anii addatti bahanii jiraatu (mandara Amharaa jedhaman). Namni isaanitti dubbatus, namni mirga isaani tuqus hin jiru. Akka barbaadan bahanii galu. Afaan Oromoos hin beekani. Ijoolleen isaaniis Afaan Oromoo hin beekan. Hanga naaanno Oromiyaatti ol iyyachuudhaan Afaan barnootaa gara Amaariffaatti akka jijjiiramu gochuuf gaarri isaan hin dhiibne hin jiru. Keessumaa, kan baay’ee nama dhibu waan isaan jedhanii gaafatan keessaa; nuti Uummatni Amhara naannoo Dambi Dolloo baay’inni keenya waan xiqqaa miti. Ijoolleen keenyaas horaa jiru abba warraa 1000 ta’uuf jirra kan boodas dabalaa deema; kanaaf akkuma Naannoo KAMISEE, ‘Oromiyaa naannoo Addaa Amharaa’ jedhamee akka nuuf adda bahuu jedhanii Region (Naannoo) Oromiyaa gaafatani. Garuu hanga yoonaa hin milkoofne. Jarreen kun naannoo Laga Qeexoo bakka qonnaaf baay’ee mijaa’aa kana uummatni keenya hin arganne irra qubatanii jiru. Laftichis Laga Guddaa Qeexoo kana faana walbukkee waan ta’eef jal’isiif baay’ee kana mijaa’udha. Garuu jarri durumaanuu kadhaadhaan dhufan, hojii hin beekani. Ammallee kadhaa irraa adda hin bane.
Egaa Obbo Shiferaa Shugutee Naannoo Kibbaa, jarreen akkanaa kana ari’uun isaa ni yaadatama. Amhaaraan maaliif Kibba fi Oromiyaa keessa akka qubatan taasifame?? Egaa yaada koo gabaabsuuf, gara magaalaa ‘Dambi Dolloo’ yeroo deemtani seenaa kana namootni gurguddoon isinitti himu. Jara sanas irra deeme ilaalee. Lafa keenyaa ‘Abba koof fi Akaakayyukoo irraa kutanii keennaniif’ jedhanii kan himatanis Oromoo baay’eedha. Jaarsoliin naannoo Dambii Dolloos dhimma kana yeroo gabaabduu ani qabu keessatti naaf ibsan.
Namoonni naannoo osoo beel’anii afaan qabatii taa’u jedhu.Isaan kunis dhiphina lafaan baay’ee rakkachaa jiru. Keessumaa namootni lama ani haasofsiise kunniin akka jedhanitti; ”Silaa warri naannoo Dambi Dollo barumsa qabaniifi baratan karaa nuuf saaqu jennee turre, silaa iyyata barbaachisu osoo nuuf gochuu danda’anii unuu itti deemmanna, sagalee dhageessifanna naan jedhu”… Yoo abbaan iyyate ollan dirmata’ jedhu mitiiree ilmako naan jedhan”.
Namichi Obbo Waggaarii jedhamu akkas jedhanii dubbatan; ani Radio Ameerika nan hordofa, tarii namichi Debuubii (Kibba) sun Warra Amaara deemanii lafa namaa qabatani kana akka ari’e dhagaheen ture; warri kan keenyaa maal ta’ani? Uumatni fi dargaggootni naannoos maal nurratti dhiisan? Lafa abbaakoo ani otoo hin dhaaliin eenyutu Abbayi gamaa dhufee akka dhaaluuf kenneef jedhee hin gaafatuu?“ Jedhan.
Gabaabumatti, mee Warri naannoo ani kaase kana jirtan fi quuqamtoonni Oromoo hundi mee yaada akkamii qabdu? Naannoo Tigray uumatni Amhaaraa qubatani hedduun hin turre warri jiranis, hundi dhiibbaa uummataatiin gadhiisanii arri’amaniiru. Naannoo kibbaas akkasuma gara biyya saaniitti akka galan godhamaniiru. Oromiyaan maaliif diina ofi keessaatti hammattee teessiree? Isaani warri bour Oromoo bulchina jedhanii aangoo gaafatani. Gaafa region’ bira deemnee Afaan keenyaa haasofnu mirgi keenya hin eegamu, ni arrabsamna. Naannoo Oromiyaa keessatti maaliif manni barumsaa warra Naftanyaaf banamee itti baratu? Barattootni Oromoo region Amaahaara deeman gidiraa hedduutu isaani irra gaha, kan isaanii garuu lafa Oromoorraa akkamiin qubatanii jiraatu.
Nuti hanga yoomitti gadiijennee bitamnee oiff akka sareetti ilaalamnee jiraanna?? Qeerroo fi shamarrani keenya bakka jiruutti hojiif haa kaanuu, diina ofi keessaa haa sochoofnu. Manni barnootaa warraa amahaaraa Oromiyaa keessaa gubatee baduu qaba. Oromoon biyya isaa irratti kabajamuu qama. Kan ofi kabajee lafa fi saba keenya kabachiisuus Oromoo hunda keenya, keessumaa dhalootaa haaraa. Ta’uu baannaan, dhalootaa keenyaa garbummaa keenyee darbuu taati !!!
Posted by Oromo firee speech at 3:48 AM
“Chaltu as Helen,” and Oromophobia
Ethiopian opposition says members beaten, illegall...
The rebel group, the Ethiopian People’s Patriotic ...
Oromo Demonstrajon i Bergen Norway Oktober 26,201...
Beeksisa Wal-gahii WWDO, Sadaasa 03, 2013
Al-Shabaab rebuilds forces in Somalia as African U...
Sabboontoti Oromoo 69 ta’an Oromummaan Yakkamuun M...
Norway: Bergen streets in the fight against torture
Jaal Obsee Margoo
Sirni Awwaalchaa J/Obsee Kabajaa Olaanaan Raawwate
Godina Shawaa lixaa aanaa Hincinnii keessatti uumm...
Buufata oduu irraa gara daandii hojiitti (Action) ...
Godina Jimmaa aanaa Saqqaa keessatti hojjettootni ...
African rule of law declines despite economic gain...
The Untold Story of “Raggaatuu”- The Famous OLA Co...
Jaarmayootni siyaasaa Oromoo sochii “Oromo First” ...
Yuunivarsiitiileen Impaayera Itoophiyaa keessaa di...
Yuunivarsiitii Diillaa damee Samaaraa keessatti di...
ONLF fighters attack Kebridahar Airport
warri ormaaf ergamuu jiruu isaanii godhatan abjuun...
Ethiopia’s first marathon draws crowds to ‘land of...
Call for a Peaceful Rally Bergen, Norway
Ethiopian completes fastest marathon run in Canada...
Wallagga,Aanaa Eebantuu Keessatti Hojjettooti Moot...
Chaltu as Helen: an everyday story of Oromos traum...
Madda Walaabuu Media Foundation is to Launch a New...
Index says 10 countries, including India, China, a...
Election dispute leads to violence outside Batters...
Yuunivarsiitii Dabra Maarqos keessatti Diddaan bar...
Is the Horn of Africa facing another collapsing st...
Australia (Brisbane Times) — Andreas Obermair regu...
"We've never seen a fish this big," said Mark Wadd...
Distinguished Purdue professor Gebisa Ejeta appoin...
(Reuters) - Girma Seifu Maru, Ethiopia's sole oppo...
Miseensotni EPRDF ji’a tokko keessatti baay’inaan ...
Invitation to 5th Anniversary of OROMO HOUSE in DC...
(Updated) Nigeria beat Ethiopia Changing Three Mon...
The way forward for our continent
Hojjettootni hidha Abbayyaa gaaffii dabalinsa miin...
Unity in Diversity vs. Disunity in Diversity in th...
Leenjifamtootni waraana Ittisa biyyaa Injineering ...
October 8, 2013 (Denver Post) — The prosecutor in ...
Dr. Mulatu Teshome Wirtuu to be the country’s new ...
Tax Payers’ Money is Funding Terrorists in the Hor...
Ayyaanni Irreecha Malkaa Ateetee Burraayyuu Keessa...
በጣሊያኑ የባህር አደጋ የሞቱት የ153 የኢትዮጵያውያን እና የኤርትራውያን ስም ...
Ethiopia govt. links opposition leaders to terrorism
ከሰማይ ወረደ የተባለውን መስቀል ለማየት የተደረገ የግር ጉዞ አና በፎቶግራፍ የ...
The late prime minister of Ethiopia "funny" respon...
Tesfaye Gebreab: The man who created the first Oro...
Italy boat sinking: At least 130 African migrants ...
Darbaa Dabarsa Gurguramnee Dhumni Keenya Kana Ta’e
“Oromiyaa Tiyya” North American Tour of Haacaaluu,...
Agarii Tullu: from serfdom to a revered Oromo hero
Wayyaanee EPRDF Sabababoota adda addaan Uummata Or...
Gaaffiin daballii miindaa jalqabame itti fufuun wa...
“Waa Malli Nu Dhibus,….Keessaa Baana Rakkoo!”
September 14, 2013 Oromo youth in Norway protested...
Top Latest Oromo News: Waamicha Yaadanno FDG (Finc...
Waamicha Walgahii Ummataa, Konyaa ABO – Washington...
Gabaasaa Haala Kabaja Ayyaana Irreecha Harsadii fi...